मान्छे मार्न के को हतार Global TV Nepal
मान्छे मार्न के को हतार
संवेग बस्नेत । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री नविन्द्रराज जोशी नर्भिक अस्पताल (काठमाडौं, थापाथली) मा उपचार गराई रहेका छन् । आईसीयु कक्षमा रहेका जोशीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ । तर बुधवार उनको निधन भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा श्रद्वाञ्जलीले भरिए । पार्टीका जिम्मेवार नेता र शुभचिन्तकले नै लेखे पछि जोशीको निधनको खवर डढेलो झै फैलियो । सामाजिक सञ्जाल श्रद्धाञ्जलीले भरिदै गर्दा जोशी चाही अस्पतालको शैयामा जीवन स्वास्थ्य लाभ गरि रहेका छन् । भेन्टिलेटरमा राखेर उनको उपचार भैरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई आधार वनाएर कतिपय सञ्चार माध्यमले समेत जोशीको मृत्युको समाचार वनाए, त्यो पनि हल्लाकै भरमा । शतप्रतिशत प्रमाणित नहुञ्जेल समाचार प्रवाह गर्न नहुने पत्रकारिताको सामान्य सिद्वान्त विपरित । कांग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेता, वुद्विजीवी र नाम चलेका पत्रकारसम्मले जोशीलाई श्रद्धान्जली दिए । उपचाररत व्यक्तिलाई श्रद्धान्जली दिएर मृत्युका गलत समाचार बाहिरिएपछि अस्पताल प्रशासन, परिवार र पार्टीले खण्डन नै गर्न पर्यो । अफहवा फैलिए पछि नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट नै गरे । शर्माको ट्वीट यस्तो छ :
मृत्युलाई परास्त गर्न आदरणीय नविन्द्र दाई लाई सफलता मिलोस् ।
हल्लाका आधारमा अनेक नलेखौं । अत्यन्तै चिन्ताजनक स्थितिमा मृत्युसंग जुधिरहनु भएको बेला भगवानसंग प्रार्थना गरेर सकारात्मक आशा राखौं । प्रवक्ता शर्माले मात्रै नभएर जोशीको मृत्युका बिषयमा फैलाइएका निराधार समाचार र हल्लाका बिषयमा विभिन्न व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरे । ती मध्येका एक ह्न पत्रकार पवन आचार्य । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमै लेखेका छन्, अलविदा र सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनाका बीचमा मानिसको जीवन हुन्छ । कम्तिमा मानिसको जीवनका बारेमा यत्तिको हलुका ढंगबाट प्रस्तुत नहोऔं । बाँकी त तपाई आफै बुझकी हुनुहुन्छ । हस् त नमस्ते ।
अर्का पत्रकार उमाकान्त खनालले आक्रोश व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पोष्ट गरेका छन् ।
ओ, काठमाडौंमा बस्ने ठूला भनाउदा मिडियामा काम गर्ने दाजु–दिदीहरु, कुनै मानिस अस्पतालमा गंभीर अवस्थामा उपचार भैरहेको छ भने त्यही लेख्नुस् न । किन मर्नु अघि नै मार्नु हुन्छ ? कि अस्पताल वा परिवारका सदस्यसंग पहुँच छैन ? छैन भने चिया पसल खोलेर बस्नुस् । पत्रकारिता छाडिदिनुस ।
यस्ता हल्ला र अपरिपक्क समाचार नेपाली समाजका लागि नौलो विषय चाही होइन । विगतमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र बरिष्ठ संगतीकार अम्बर गुरुङ जीवीत हुदै मृत्यको समाचार फैलिएको थियो । अस्पतालमा उपचाररत व्यक्तिको मृत्यु भएको हो वा होइन ? आधिकारिक घोषणा गर्ने जिम्मेवारी उपचारमा संलग्न चिकित्सक, परिवार वा उ आवद्ध संस्थाको हो ।
अनुमान र हल्लाका भरमा गलत सूचना र समाचार प्रवाह गर्दा परिवार र शुभचिन्तकहरुको मानसिकतामा पर्ने असर तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग वढ्दै गर्दा सत्य भन्दा असत्य समाचार र सूचना छिटो भाइरल हुने गरेका छन् । यस्ता संवेदनशील विषयमा गलत सूचना प्रवाह हुन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
दाङमा स्कूल बस दुर्घटना : एकको मृत्यु , २२ घाइते
अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि राणाले दिइन् धनगढी उपमहानगरपालिकालाई १० लाख
अखिल क्रान्तिकारीको बन्दसत्र सुरु
टोकियो ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै